Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib: Maxaa labadoodaba loogu diiday inay galaan Israel? - Jigjiga Online
HomeSomalidaIlhaan Cumar iyo Rashida Tlaib: Maxaa labadoodaba loogu diiday inay galaan Israel?
Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib waxay taariikh sameeyeen bishii Nofembar ee sanadkii 2018-kii, markaas oo ay noqdeen dumarkii ugu horreeyay ee muslimiin ah oo ku biiray aqalka wakiillada Mareykanka.
Labadooduba waxay xubno ka yihiin xisbiga dimuqraaddiga Mareykanka waxayna horumar weyn ka sameeyeen doorkooda siyaasadda.
Arrimaha kale ee ay ka mideysan yihiin waxaa ka mid ah inay taageeraan xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda.
Intaas waxaa usii dheer inay cod sare ugu doodaan dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga.
Laakiin waxaa jira hal wax oo iyaga khaas u ah ayna uga duwan yihiin cid walba oo kale, xitaa xubnaha kale ee aqalka wakiillada ay ka tirsan yihiin, waxaasina waa Israel.
Muranka ku saabsan go’doonka
Ilhaan iyo Rashida labadooduba waxay aad u cambaareeyaan sida ay Israel ula dhaqanto Falastiiniyiinta, waana labada siyaasi ee kaliya ee ka tirsan aqalka Congress-ka ee sida cad u taageera falcelinta falastiiniyiinta ee ku aadan go’doonka ay Israel galiso, iyo waliba dhaqdhaqaaqyada lagu bartilmaameedsado Israa’iiliyiinta.
Arrintan waxay hadda sababtay in Ilhaan iyo Rashida ay noqdaan wakiilladii ugu horreeyay ee laga soo doortay Mareykanka oo abid laga mamnuuco galitaanka Israel.
Tani waxay layaab ku noqoneysaa 72-da xubnood ee ay isku aqalka ka tirsan yihiin, kuwaasoo horraantii bishan qarash u uruurinayay inay booqasho loo wada dhan yahay ku tagaan Israel, si ay uga qeyb galaan munaasabad sanadle ah.
Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib waxay si wada jir ah u qorsheynayeen inay u duulaan Israel, si ay u tagaan dhulka falastiiniyiinta ee ku jira gacanta Israel, kaasoo ah bariga magaalada Qudus iyo Daanta Galbeed.
Xaqiiqdii, Rashida waxay safarkaas kusii dari lahayd booqasho ay ugu tagto qoyskeeda.
Haweeneydan 42 jirka ah ee baratay cilmiga sharciga waxay heysataa dhalasho Mareykan ah, balse waxay asal ahaan kasoo jeedda Falastiin.
Ayeeyadeed iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskeeda ayaa ku nool Daanta Galbeed.
Markii ay mas’uuliyiinta Israel soo saareen go’aanka ay ku mamnuuceen safarkeeda, Rashida Tlaib waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay sawir muujinaya ayeeyadeed, kaasoo ay kusoo qortay: “Go’aanka ay Israel ku mamnuucday soo galitaanka gabadheeda, oo xubin ka ah aqalka wakiillada Mareykanka, waxay astaan u tahay daciifnimadooda, sababtoo ah runta ku saabsan waxa ku dhacaya Falastiiniyiinta waa wax laga cabsado”.
Dhawaan, Rashiida Dulayb ayaa ku gacan saydhay ogolaansho Israel u siisay in ay ayeydeed ku booqato daanta galbeed ee la haysto.
Waxay sheegtay in shuruudaha lagu xidhay socdaalkeedu yihiin kuwo adag oo dullayn ah isla markaana aan sidaa lagu aamusiin karin iyada.
Marka laga hadlayo muranka la xiriira arrintan, qofka ay xulafada isugu dhow yihiin waa Ilhan Cumar.
Ilhaan oo 38 jir ah waxaa laga soo doortay gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota, waana gabar Soomaali-Mareykan ah oo xijaabka xirata, Mareykankana tagtay iyadoo gabar yar ah sanadkii 1995-kii.
Qudheedu waxay Israel ku cambaareysay diidmada ku saabsan safarkooda.
Hadallada ay Ilhaan ka jeediso Israel waxay xasaasi ahaayeen tan iyo markii ay ku biirtay golaha wakiillada Mareykanka.
Horaantii Sannadkan, waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ku eedeyneyso dadka Israel u ol’oleeya.
Warbaahinta Israel ayaa sidoo kale aad u weerartay Ilhaan.
Dagaalka ay warbaahinta Israel ku qaadeen Ilhaan Cumar
ONLF Oo Jawaab Degdeg Ah Ka Bixisay Hadal Kasoo Yeedhay Madaxweyne Mustafe, Digniina U Dirtay Canaasiirtii Cabdi Iley